Otu njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ ga-esi gbakee: Ihe mmụta sitere na Hawaii
Home » Akụkọ Njem Nleta » Otu njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ ga-esi gbakee: Ihe mmụta sitere na Hawaii
Hawaii bụ ihe atụ magburu onwe ya banyere otu njem njem ga-esi dị ka ọdịnihu nke njem. Frank Haas, onye otu na World Tourism Network, na onye isi nke Marketing Management Inc na Honolulu na-ekerịta nyocha ya na ụzọ maka echiche ụwa banyere ọdịnihu nke ụlọ ọrụ njem na njem.
Kedu ihe na-eme njem nlegharị anya, tupu - na post COVID bụ ihe ngosi site n'aka onye otu WTN na onye ndụmọdụ onwe ya Frank Haas, onye bụbu onye ntụzi aka nke ahịa mba ụwa maka Hawaii Tourism Authority
Marketsfọdụ ahịa ga-agbake ngwa ngwa karịa ndị ọzọ, mana njem nleta ga-alọghachi n'ụzọ dị iche na-akọwa Frank Haas na ngosi a mere na Japan n'oge na-adịbeghị anya
Nkà na ụzụ na ngwa ọdịnala ga - eduga n'ọchịchị nke ụlọ ọrụ ndị ọbịa
World Tourism Network na nso nso a kpọrọ Patricia Herman, Director nke Marketing na Development nke Hawaii Tourism Authority. Ọ mere ihe ngosi na ihe ịga nke ọma n'oge na-adịbeghị anya n'iweghachi ndị njem nlegharị anya na ọkwa nkịtị. John de Fries, onye isi oche nke HTA nwere nchegbu dị iche iche na-emeghachi omume na Senate nke Hawaii na-aga n'izu gara aga na-ekwu na Omenala Hawaii na-ebelata ọzọ ka ọ bụrụ ngwaahịa nkịtị nke nwere ike ịbụ ahịa ịnyịnya.
Onye bụbu HTA International Marketing director Frank Haas, onye bụzi onye ndụmọdụ nke Marketing Management, Inc. nwere usoro ezi uche dị na iji Hawaii dị ka ihe atụ nyekwa ụwa ma gosipụta ihe ndị a na mkparịta ụka njem nlegharị anya nke Hawaii na Japan.
Gaa n'ihu wee pịa na-esote iji hụ nkọwa zuru ezu nke Frank Haas gosipụtara
Caribbean United na St. Vincent ya na Jamaica's Minister of Tourism Minister na-ebute ụzọ
Ndị ụgbọ elu Korea na-atụ anya inweta uru na nkeji iri na ise a